Maalinta: Noofambar 25, 2019
Waqtiga Safarka ayaa lagu soo gaabin doonaa Ankara Istanbul YHT Line; Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan ayaa soo gaabin doona waqtiga gaadiidkaba tareenka xawaare sare ku maraya (YHT) ee qadka Ankara-Istanbul. [More ...]
Da'da Ankara ee Gaadiidka; Aqoon isweydaarsiga Gaadiidka ee Ulaşım Ankara ğinde oo ay martigelinayso Agaasimaha Guud ee Magaalada Ankara ee EGO, Agaasimayaasha Guud ee Gaadiidka Caasimadda ayaa laga wada hadlay. Furitaanka Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Magaalada Ankara Mansur Yavaş [More ...]
500 Fidan oo ka socda Kayseri Transportation Inc. Gaadiidka Inc. gudaheeda Dowlada hoose ee Magaalooyinka Kayseri. Wuxuu ku beeray "500 saplings" biyo-xidheenka 'Sarımsaklı Dam' isagoo ku daray mid cusub howlaha wax beero dhaqameedka. Gudaha Dawlada Hoose [More ...]
Xarunta tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa ee 4
Xarunta tareenka Xawaare Sare ee Bursa ee 4; Magaca Bursa waa mashruuc tareen oo deg deg ah, tartiib tartiib tartiib ah, sida ku xusan qandaraaska lagu dhawaaqay, xarunta 2 wuxuu noqon doonaa 4. Mashruuca tareenka xawaaraha sare ee Yüksel… Dhismuhu uma socon sidii loogu talagalay. 3 sano kahor… [More ...]
4 Bilyan Doolar Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee ka socota Ankara ilaa Kapıkule
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Billion Dollar ee 4 ee ka socda Ankara ilaa Kapıkule; Mehmet Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Dhaqaalaha, ayaa yiri: 'Waxaan la galnay heshiis dhaqaale, Adapazarı wuxuu ka gudbay Buundada Yavuz Sultan Selim. Halkalıama halkaa ka yimid [More ...]
Wasiirka Turhan wuxuu baaray marxaladaha wax soo saarka ee Mashruuca Tareenka Qaranka ee Korantada; Maareeyaha Guud ee TÜVASAŞ iyo Gudoomiyaha Prof.Dr. Wasiirka Turhan ayaa albaabka kula kulmay İlhan Kocaarslan albaabka isaga oo kaashanaya borotokoolka TÜVASAŞ, tareenka qaranka ee Korantada. [More ...]
RayHaber 25.11.2019 Warbixinta Shirka
Halkee Iibsataa 145.000 LT Shidaalka Shidaalka
Taraamka u kala qaybin doona Atakum laba marin dhulka hoostiisa?
Taraamka u kala qaybin doona Atakum laba marin dhulka hoostiisa? ; Duqa Magaalada Samsun ee Magaaladda Mustafa Demir ayaa sheegay in khadka tareenka ee ka gudba Atakum uu laba u kala qaybiyo degmada. [More ...]
110 Milyan Euro Deyn oo Deutsche Bank ah oo loogu talagalay Sultanbeyli Çekmeköy Subway
110 Milyan Euro Deyn oo Deutsche Bank ah oo loogu talagalay Sultanbeyli Çekmeköy Subway; Imamoglu, Madaxweynaha IMM, wuxuu sheegay inay sameeyeen koox ku dhow 20, gaar ahaan agagaarka garoonka diyaaradaha Ataturk iyo mashruuca Channel Istanbul. İmamoğlu, [More ...]
Sarkaalka Sarkaalka XCDUM waxaa lasiiyay TCDD
Sarkaalka Sarkaalka ah ee 22 ayaa la siiyay TCDD; Natiijadii ka dhalatay macluumaadka lagu daabacay rasmiga rasmiga ah ee shaqaalaha 'TCDD'ye 22 shaqaalaha rayidka' ayaa sidoo kale lagu dhawaaqay in qaar ka mid ah kaamirooyinka hay'adda gobolka la joojiyay. 6 Noofambar 2019 [More ...]
Dawladda Hoose ee Magaalada Istanbul Yenikapi Ataturk Airport Light Line Line Tender ayaa dib loo furay
Degmooyinka Magaalada Istanbul, 23 wixii ka dambeeyay doorashadii Istanbul ee bishii Juun, waa la kansalay, 'Yenikapi - Ataturk Airport Light Light Line Line Stations Awoodda Kordhinta' jilicsan ', dib ayaa dib loo furay. Hindisada ayaa lagu celin doonaa 3 Diseembar. Yenikapı Atatürk [More ...]
Maanta Taariikh: 25 November 1899 Wasiirradii Cusmaaniyiinta
Maanta oo ku taal Taariikhda 25 Noofambar 1899 Guddi La-Talinta Cusmaaniyiinta ah ayaa ansixiyay Shirweynihii Tareenka ee Anatolian-Baghdad ka dib saacado wadahadal ah. Marka loo eego; 10, oo ah shirkad laga leeyahay Jarmalka oo laga leeyahay Anatolian Railway, laga soo bilaabo Konya ilaa Baghdad iyo [More ...]